ကျောင်းမှာ၌ငါ့ကလေးကမှတ်ပုံတင်မည် | USAHello | USAHello
ယူအက်စ်အေမှာကျောင်းသင့်ကလေးစတင်ရန်သင်ပထမဦးဆုံးကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်သင့်ကလေးမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်. ဒါဟာသင်ကျောင်းသင့်ကလေးကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကျောင်းနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာစာတမ်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မည်သို့ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုမှတ်ပုံတင်ရန် Learn. နေရာချထားနှင့်အထူးအတန်းနှင့် ပတ်သက်. Read. သင့်ကလေးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သို့သောအကြောင်း Read, အဘယ်အရာကိုသင့်ကလေးပျက်ကွက်လျှင်လုပ်ဖို့, နှင့်ကျောင်းဖို့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ.
ယခုနှစ်သင့်ကလေးမွေးဖွားခဲ့သည်နှငျ့သငျရှငျနထေိုငျရာအရပျသင်၏သားသမီးကိုသွားလိမ့်မည်သည့်ကျောင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်. သင့်ဒေသခံလူထုကျောင်းက Find.
ကျောင်းခရိုင်အတွင်းရှိနေထိုင်၏အထောက်အထား. ဤသူသည်သင်တို့သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်ကြောင်းကိုပြသရန်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်. နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထား၏နမူနာတခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဘဏ်ကြေညာချက်, လိပ်စာနှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ် utility ကိုဥပဒေကြမ်း. ဒါဟာသင်ကျောင်းကလေးတွေ enrolls ဘယ်မှာရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်စွန့်ခွာကြောင်းကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်.
အသက်အထောက်အထား. ဥပမာ, သင့်ကလေး၏မွေးနေ့နှင့်အတူမွေးဖွားလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်.
သငျသညျကြောငျးတှငျသင့်ကလေးမှတ်ပုံတင်ရန်သည့်အခါတစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းခရိုင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိစေခြင်းငှါ. ကျောင်းခရိုင်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံစံကိုရှာပါ. သင်တို့သည်လည်းကျောင်းသွားပြီးကျောင်းအတွင်းရေးမှူးပြောပြရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်.
US မှာအများစုကကျောင်းများတွင်နွေရာသီသို့မဟုတ်အစောပိုင်းကျဆုံးခြင်းရဲ့အဆုံးမှာစတင်, သြဂုတ်လသို့မဟုတ်စက်တင်ဘာလထဲမှာ. သငျသညျနွေရာသီအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိမည်ဆိုပါက, သငျသညျစာရင်းသွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ဇူလိုင်လသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအတွင်းကသင့်ကလေး၏ကျောင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. သင်ကျောင်းတွင်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိပါလျှင်, သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ကလေးကိုကျောင်းအပ်သင့်တယ်.
ကျောင်းတက်ခြောက်နှစ်ကြားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျောင်းသားများအတွက်လိုအပ်ပါသည်နှင့် 16. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ, ခေတ်ကာလတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်နေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိနှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အရေအတွက်ကထွက်ရှာတွေ့.
ပုံမှန်တက်ရောက်သူသင့်ရဲ့ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်. ကျောင်းများတက်ရောက်သူခြေရာခံစောင့်ရှောက်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းလည်းနေ့ရက်များစွာလွဲချော်လျှင်သင်ဥပဒေနှင့်အနှောင့်ရှက်အတွက်ရနိုင်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားလည်းနေ့ရက်များစွာလွဲချော်မှစတင်သည်လျှင်သင်သည်များစွာသောသတိပေးချက်များရလိမ့်မယ်. အဆိုပါအရေအတွက်အတိအကျကိုကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းမှခရိုင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်.
သငျသညျကြောငျးမှပျောက်ဆုံးနေသည့်အခါတစ်ဦးမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်. အများစုမှာကျောင်းများရှိ2ပျက်ကွက်အမျိုးအစားများ. အဆိုပါ2အမျိုးအစားများကိုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် unexcused ပျက်ကွက်ခှငျ့နေကြတယ်.
ခွင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမရှိခြင်း (ဥပမာ, ဘတ်စ်ကားကိုတက်မပြပါဘူးဆိုရင်)
ခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည် (သွားမရ) တစ်ဦးလူတန်းစား
ကျောင်းကိုနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ခြင်း. နှောင်းပိုင်းတွင်လည်းဖင်ဟုခေါ်ခံရ. ဖင်လှနှင့် unexcused နိုင်ပါသည်. ခှငျ့ဖင်လှပျက်ကွက်ကဲ့သို့တူညီသောစာရင်းရှိ.
ကျောင်းသားအစဉ်အမြဲသူသို့မဟုတ်သူမလွဲချော်အားလုံးအလုပ်တက်အောင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်. သငျသညျ, ဒါမှမဟုတ်မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူ, ကျောင်းမရှိခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ပြောပြတာဝန်ရှိသည်. ရုံးသို့မဟုတ်တက်ရောက်သူရုံးခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ကျောင်းကိုပြောပြပါ, ဒါမှမဟုတ်ဆရာတစ်ဦးမှတ်ချက်ရေးသားခြင်းနှင့်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်, အတွင်းဝန်, သို့မဟုတ်ကျောင်းအုပ်ကြီး. သင်သိလိုလျှင်သင့်ကလေးကိုရှေ့သို့အချိန်ကျောင်းမှလက်လွတ်လိမ့်မယ်, ရှေ့တော်၌ထိုကျောင်းသည်ပြောပြရန်ပိုကောင်းက. တခါတလေ, မရှိခြင်းမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါကအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. နံနက်ယံ၌ကျောင်းသို့မဟုတ်နောက်နေ့ Call.
ကျောင်းသားများအများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများယူဆောင်လာရန်ရှိသည်, သို့မဟုတ် tools များ, သူတို့နှင့်အတူကျောင်းသို့. အဆိုပါကျောင်းခရိုင်က်ဘ်ဆိုက်, ကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်, ဒါမှမဟုတ်စာသင်ခန်းဆရာမစာရင်းကိုရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါစာရင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ပါတယ်.
School တွင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစျေးကြီးရနိုင်. အရိုးရှင်းဆုံးစက္ကူ, ခဲတံ, နှင့်ခြံအလုပ်. သင့်အနေဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ် fanciest ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါဘူး. တခါတလေ, ဆရာ, ဆရာမသို့မဟုတ်ကျောင်းများအပိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှိသည်နှင့်သင်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပေးနိုငျ. ကျောင်းများသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခါတစ်ရံကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပျောက်ပေး. ကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးရှာရန်ကျောင်းတွင်စတင်မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုကူညီ. အဆိုပါ Giveaway အများစုမှာကျောင်းတစ်နှစ်စတင်မတိုင်မီညာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်.
အများစုမှာကျောင်းကခရိုင်ကျောင်းရဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေး. သင်ကျောင်းသို့အနီးကပ်အသက်ရှင်လျှင်, ကျောင်းသင်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်စီးနိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ,. အဆိုပါကျောင်းခရိုင်က်ဘ်ဆိုက်ဘတ်စ်ကားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်လိမ့်မယ်. ဒါဟာရှိရာဘတ်စ်ကားစောင့်ဆိုင်းရန်နှင့်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာဘယျအခြိနျဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါပွောမညျ. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးကိုဆက်သွယ်ပါ.
ကျောင်းစာအုပ်ခရိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျောင်းသားတစ်ဦးအခွင့်ထူးကိုစဉ်းစား, မရကျောင်းသားတစ်ဦးလက်ျာဘက်. ကျောင်းသားများကိုစနစ်တကျပြုမူကြသည်မဟုတ်လျှင်အခွင့်ထူးကိုယူသှားနိုငျသညျ. ကျောင်းဘတ်စ်ကားစီးနင်းကျောင်းဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောအပြုအမူလိုအပ်ပါတယ်.
ကာကွယ်ဆေးထိုးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကလေးများပုံမှန်အားဖြင့်ကျောင်းသို့သွားကြဖို့ရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်ကြောင်းရိုက်ချက်များများမှာ. ဤရွေ့ကားလိုအပ်ချက်များကိုကျောင်းခရိုင်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား. သူတို့ကတခါတရံပြည်နယ်ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြသည်. သင့်ကလေးအားလုံးလိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးထိုးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာကြောင့်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးစွန့်လွှတ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်းများများသောအားဖြင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကျောင်းက start စာရင်းသွင်းဘို့လိုအပ်သည်.
ပြည်သူပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းတိုင်းနေ့ကကလေးများတန်ဖိုးနည်းသို့မဟုတ်အခမဲ့နေ့လည်စာပူဇော်. ဒါဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းနေ့လည်စာအစီအစဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဗဟိုရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေပိုက်ဆံပမာဏကိုကျောင်းသားတစ်ဦးတစ်ဦးအခမဲ့နေ့လယ်စာကိုလက်ခံရရှိရန်ငျြးပွညျ့မီခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်, လျှော့ချ-ကုန်ကျစရိတ်နေ့လယ်စာ, သို့မဟုတ်မ. တချို့ကကျောင်းကခရိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းနေ့လည်စာအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. နေအိမ်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့. ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးကိုမေး.
တချို့ကကျောင်းများတွင်ဤအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နံနက်စာပေး. တချို့ကကျောင်းတနင်္ဂနွေအဘို့အနိမ့်ဝင်ငွေမိသားစုများအတွက်ကျောင်းသားများကိုစားနပ်ရိက္ခာပေး, ကျောင်းကအားလပ်ချိန်, သို့မဟုတ်နွေရာသီအားလပ်ရက်. အဆိုပါကျောင်းတွင်အတွင်းရေးမှူးအခမဲ့လျှော့ချနေ့လည်စာအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့စကားပြောနိုင်သည်. သို့မဟုတ်, ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်သူကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်.